LibreOffice 4.0 ga - eme ka ọ dị mma ma dị mma | Site na Linux
Lọ ọrụ kachasị amasị nke ụwa sọftụwia n'efu na-aga ịhapụ ụdị nke 4.0, nke gụnyere mgbanwe ndị na-atọ ụtọ, gụnyere ohere nke jiri isiokwu Firefox Persona, ihe omuma nke ndi mmadu iji chịkwaa ihe ngosi site na ekwentị gam akporo na mmụba arụmọrụ arụmọrụ na nkwado maka usoro dị iche iche.
Lee, m wetara gị nchịkọta nke njirimara ọhụụ ya, na ndetu ihe ederede(ka na-aga n'ihu) site na Document Foundation wiki ị ga-ahụ ndepụta zuru ezu na nkọwa ndị ọzọ.
A gbakwunyere arụmọrụ Mmetụta Remote Control maka gam akporo igwe. Na nke a, ọ ga-adị mfe iji gam akporo gam akporo iji chịkwaa ngosi.
A gbakwunyere nhọrọ ahụ Mpikota eserese maka Impress, Calc, na Draw, abịabeghị na Onye edemede. Ọrụ a na-enye gị ohere idezi eserese ahụ, na-enye gị ohere ịgbanwe nha ha (na pikselụ na DPI), mkpebi, ogo onyogho (0 ruo 100) na JPEG, ma ọ bụ ọkwa mkpakọ (1 ruo 9) na PNGs.
Melite ogo nke onyonyo dị na dọkụmentị
Njikọ dị mma na menu ịdị n'otu zuru ụwa ọnụ ma n'otu oge ahụ na HUD.
Asụsụ maka ịhọrọ ụdị ga - enye gị ohere ịlele a style preview
Nkwado Firefox Personas
Maka nke a, anyị ga-agarịrị Ngwaọrụ -> Nhọrọ -> Nhazi -> Họrọ Onye . A ga-egosi a dialog ga-ekwe ka anyị tinye URL nke isiokwu anyị chọrọ iji.
Ogologo nkwado maka faịlụ Microsoft Visio, ugbu a na akwado ụdị Visio niile sitere na Visio 1.0 1992 ruo Visio 2013.
Kachasị maka ịhụchalụ na-akpọ multimedia faịlụ site na Linux na Ihe ngosi. Nkwado maka Gstreamer 1.0 bịakwara.
E gosipụtara ogo eserese na mbupụ ya na PDF.
Optimizations na isi iyi koodu na mkpochapu nkwado maka mbupụ n'ụdị ochie, dị ka Office 95 na StartOffice 1 na 5 akwụkwọ.
Enwere ike inweta akwụkwọ adreesị Thunderbird site na ditros dị ka Debian, Ubuntu na nkwekọrịta ha.
Ezinụlọ ọhụrụ 4 nke ederede ederede n'efu: Mepee Ohere (Gbagoo), PT Serif (ParaType), Isi mmalite Usoro Pro na Isi mmalite Sans Pro (Adobe)
O kwere omume ugbu a iji ụdị isi eji isi eji eme ihe na ụdị ụkwụ dị na peeji mbụ na Onye edemede na-enweghị iji ụdị ibe dị iche, maka ozi ndị ọzọ agụ nke a.
Nkwado maka ibubata na ibupụ ndapụta mgbakọ na mwepụ RTF sitere na Onye edemede.
Nkwado maka ịbubata nkọwa ink sitere na akwụkwọ RTF na DOCX (dịnụ mgbe ị na-eji Okwu site na mbadamba)
LibreOffice 4.0 ka nọ na ọkwa mmepe, m ghọtara na ọ dịlarị na ebe nchekwa Ubuntu 13.04, yabụ ọ dị ka ọ ga-adị njikere site na Eprel na-abịa. Ka anyị chere maka nsụgharị ọhụrụ, nke na-ekwe nkwa ọtụtụ ihe.
Onye edemede nke isiokwu: Jacobo Hidalgo Urbino (aka Jako) si na obodo ụmụ mmadụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » LibreOffice 4.0 ga-emeziwanye n’ọdịdị na arụmọrụ
Achọrọ m mgbanwe na arụmọrụ karịa ọdịdị.
Ozugbo ọ dị, m na-eme onwe m obere «pacman -S libreoffice» 😀
Eziokwu bụ na m ga-achọ menu dị ka ụlọ ọrụ microsoft, n'onwe m achọtara ya na ọ na-arụ ọrụ nke ọma, nke bara uru yana nke amamịghe, mana ikekwe nke ahụ enweghị ike ịbụ n'ihi na n'ezie a haziri atụmatụ ahụ.
Ribbon? Ee, nhazi ahụ dị mma.
Nke ahụ bụ, Ribbon, ihe niile kpatara ya n'ụwa. Enwere m mmasị na nhazi ahụ nke ukwuu na onye ọ bụla nọ n'okpuru dị mma, AutoDesk, Winzip na ndị ọzọ nke m na-echetaghị iji ya, yabụ echeghị m na ọ nwere ikike.
Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ patented, mana ọ na-ejikwa ya na autodesk, mana n'onwe m, ọ ga-amasị m karịa mgbanwe nke akara ngosi.
N'ụbọchị ha tinyere eriri ahụ na-asọ oyi na ụlọ ọrụ na-akwụghị ụgwọ, m ga-amalite ịchọ ụlọ ọzọ ...
Onwe m, enwere m mmasị na interface nke LibreOffice na-arụ ugbu a, ọ bụ ihe ochie, mara mma ma na-achọsi ike yana ọbụlagodi ugbu a na anyị nwere ike itinye isiokwu (ndị mmadụ) dịka anyị na Firefox, mana kedu ihe ga-enye ya ntakịrị ihe, ihe ga-enye ya nke ahụ Free Software mmụọ nke nnwere onwe ga-abụ na anyị nwere ike ịgbanwe akara ngosi isiokwu.
Ngwaọrụ -> Nhọrọ -> Nhazi -> Oyiyi
Iji osx, ị nwere ike iji iwork nke ọma.
Achọghị m ribbom, m na-ahọrọ menu menu
Okwu interface ahụ na-ese okwu, ọtụtụ ndị na-arịọ maka mgbanwe ahụ ma enwere ndị ọzọ na-amasị ụzọ ọ dị.
Onwe m, anaghị m akwado Ribon, nke mbụ na ọ naghị amasị m na ha "detuo" Microsoft na nke abụọ na ya na MS-Office na Ribon ya ahụbeghị m ma m ga - arụ ọrụ na Libre-Office.
Ọ ka mma ịhapụ ya dịka ọ dị ma tinye atụmatụ ọhụrụ, gụnyere ịhazi nke akara ngosi na menu.
Ana m anwụ ịhụ ya ... mana ọ ga-amasị m ijikọ mma nke faịlụ .docx (Achọghị m ịma banyere azọpụta) ebe ọ bụ na ọtụtụ ihe na-agbagọ ma ọ bụ gbanwee ọnọdụ n'ụdị ndị ahụ
Kwezuo. O kwesịrị ịdị ka nke a n'etiti etiti '' nweere onwe '' (ịmaatụ: n'etiti Calligra na LibreOffice). Otu akwukwo ODT na adi iche na Onye edemede na Okwu.
Banyere DOCX, ọ dị ezigbo mkpa. Ntughari na-enweghị ntụpọ n'etiti "atọ niile" (Ana m ekwu maka Micro & Soft Office, LibreOffice na Calligra Suite) ga-abụ ihe na-achọsi ike.
Zaghachi Yuriy Istochnikov
Ndakọrịta nke usoro faịlụ dị ezigbo mkpa, yana ihe ga-agba ọtụtụ ume ịnwale ihe dị iche na n'efu.
Naanị ihe ha chọrọ bụ mgbanwe nke akara ngosi, akara ngosi ndị ahụ n'onwe ha anaghị adọta uche m, mana ha na-edebe ọdịdị kpochapụwo na-enweghị rịbọn.
Echere m na ihe kachasị m mkpa bụ ịkwalite ndakọrịta na faịlụ MS, ọkachasị na gburugburu ebe m na-arụ ọrụ. Agbanyeghị, anaghị m agọnahụ na mbuli ihu ga-adị mkpa. Iji malite, inwe ike ịgbanwe akara ngosi (dị ka ụfọdụ kwuru) ga-adị mma.
Ọ masịrị m nke ukwuu, m ga-ahọrọkwa ezigbo mgbanwe nke akara ngosi Ribon ma ọ bụ ọ bụghị Ribon oge ọ bụla m chọrọ ụlọ a, anaghị m ada ada ma ọrụ ahụ na-esite na 10
Onweghị ihe mere na njedebe na Citrus n'agbanyeghị na ọ ga-adị ka ihe google docs bụ.
Gụọ akụkọ a.
Ọ bụ eziokwu?
OpenOffice 4.0 Apache OpenO na - ewe nnukwu mmali, na - agbasi ike iji tinye ogwe aka ọhụrụ nke ga - eme ka ọ dịkwuo mfe, mara mma, kensinammuo na ngwa ngwa mgbe ị na - akọwa njirimara nke ihe ederede anyị ihe oyiyi, tebụl, wdg), na nke na-anọchi ogwe ngwaọrụ ugbu a.
Ọ bụrụ na ọ dị, n'ikpeazụ ndị ga - erite uru ga - abụrịrị anyị ndị ọrụ.
Naanị ihe dị iche na LibreOffice na OpenOffice nwere. Ọ bụ ikikere.
Akwụkwọ ikike Apache na BSD na-enye ohere iji koodu a. Onye ọrụ nke na-eji ma ọ bụ gbanwee koodu nke ụfọdụ mmemme na ikikere Apache ma ọ bụ BSD. Can nwere ike ịgbanwe ya na koodu ewere na mechiri emechi. Naanị ị ga-enye akụkọ gbasara mgbanwe ndị ị mere mana ịgaghị akwụ ụgwọ iji nye koodu nke ị banyere ma ọ bụ gbanwee.
Cheta na APple were koodu BSD iji mepụta iOS na Mac OS.
Ọfọn, abughi m ọkachamara n'okwu a, mana echere m na n'ọkwa koodu ụfọdụ ụfọdụ dị iche kwesịrị ịnwe, kedụ echiche ọ ga-eme iji rụọ ọrụ abụọ ahụ n'otu ihe ... Anaghị m ekwu na otu na-esi na nke ọzọ na nke ọzọ, mana site n'ebe ahụ ha bụ otu n'ihi Echeghị m otú .. Anyway like I said, Abụghị m ọkachamara na okwu ndị a 😀
A ga - ahụta ọdịiche dị ugbu a, dị ka Apache OpenOffice dị ka ọ dị ka ọ ga - ewelite koodu nyere IBM site na lotus.
N'aka nke ọzọ, edere eserese nke OpenOffice na LibreOffice na VCL ọba akwụkwọ, ọba akwụkwọ ndị edepụtara na C ++ nke na-adabaghị na Gtk 3.6 na Qt 4.9 T 4.9 (Qt 4.9) ma ọ bụ GNOME 3.6 (Gtk 3.6).
Anọ m na-agwa Michael Meeks site na LibreOffice (libreoffice@lists.freedesktop.org) ………. Ajụrụ m ya ma ha nwere API maka ọba akwụkwọ VCL nke LibreOffice na-eji ……. Ha azaghị m…. Ha naanị sonso ozi ọ bụla ọhụrụ programmer… ha nyere m nke a ..
https://wiki.documentfoundation.org/Development/WidgetLayout …… .. a njikọ na-egosi otú VCL ọba akwụkwọ na-arụ ọrụ…. http://docs.libreoffice.org/vcl/html/classes.html ..........
Elav OpenOffice na LibreOffice bụ isi ihe dị mkpa maka GNU / LINUX iji nweta ụlọ MICROSOFT.
Ọ bụrụ na anyị nwere ụlọ ọrụ, arụmọrụ, kwụsie ike, nke na-adọta ndị ọrụ (aesthetics).
Ekwenyere m na ohere ga-emeghe maka GNU / LINUX na obodo ka ha too.
Nweta òkè ndị ọrụ na ahịa sistemụ arụmọrụ. Ọ bụ ihe m na-arọ nrọ ma ọ dịkarịa ala
Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ ga-abụ echiche nzuzu mana ọ gaghị aba uru maka mmadụ niile ịgbanwe ụlọ akwụkwọ VCL ma degharịa interface na iji Qt?
Ọ bụrụ na Elav echiche gị dị ire ma ọ ga - edozi ihe niile.
Ikwesiri ideghari akwukwo akwukwo nile nke VCL ka ha kwekorita na Gtk 3.6 ma obu Qt 4.9, obu nnukwu oru …………… Iji ma atu, ndi PYTHON, RUBY, WxWidgets, VALA, na ndi mmeputa ha na eme ka ulo akwukwo ha kwekorita. Gtk 3.6 ma ọ bụ Qt 4.9 bụ nnukwu ọrụ mana ha na-arụ ya.
Ọ bụ nnukwu ọrụ ịmegharị VCL na Gtk 3.6 ma ọ bụ Qt 4.9 ... mana echere m na ọ ga-aba uru.
Ọmụmaatụ na peeji Gtk ha na-agwa gị asụsụ asụsụ mmemme nwere nkwado maka Gtk.
N’aka ozo, asusu ma obu ọba akwukwo ghari imeghari na Gtk (GNOME) ma dikwa na ya.
Nke a bụ ihe kpatara ụfọdụ mmemme GNU / LINUX nwere njiko eserese jọgburu onwe ya.Ọ bụ maka na ihe eserese eserese eserese na Gtk (GNOME) ma ọ bụ Qt (KDE).
Picasa ma ọ bụ wijetị Google dị egwu na GNU / LINUX maka ebumnuche ahụ.
LibreOffice 4.0 adịghị na nchekwa Ubuntu (n'ihi na ọ bụghị na Debian ma; Rene / Björn nọ na ya). Onye gwara gi ozo? Banyere.
Mozilla mara ọkwa mbụ na Firefox OS maka ndị mmepe